Public Health Concern यसरी बनाउने घरैमा सर्बोत्तम पिठो ! – Public Health Concern
यसरी बनाउने घरैमा सर्बोत्तम पिठो !
शिशु जन्मिएपछि ६ महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनुपर्छ । ६ महिना पछि आमाको दुधबाहेक अन्य पौष्टिक तत्व भएका पोषिला ठोस आहार पनि खुवाउनु पर्छ । ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि पोसिलो खाद्यपदार्थ लिटो वा जाउलो हो ।
बालबालिकालाई खुवाउने लिटो बनाउनका लागि सर्वोत्तम पिठो आवश्यक पर्छ । प्राय आमाहरुले आफ्ना बालबालिकाका लागि बजारमा पाइने सर्वोत्तम पिठो किनेर लिटो बनाउने गर्छन् । तर, बालबालिकाका लागि बजारमा पाइने सर्वोत्तम पिठो गुणस्तर नहुन पनि सक्छ । त्यसैले बालबालिकाका लागि घरमै सर्वोत्तम पिठो बनाउन सकिन्छ ।
यसरी घरमै बनाउनुस् सर्वोत्तम पिठो
– सर्वोत्तम पिठो बनाउन सबैभन्दा पहिला चामल, गहुँ, मकै, जौं आदि तयार गर्ने,
– सर्वोत्तम पिठो बनाउन तयार पारीएको अन्न तथा गेडागुडीलाई राम्रोसँग केलाउने,
– अन्न तथा गेडागुडीमा भएका किरा, ढुङ्गा, माटो हटाउने,
– अन्न तथा गेडागुडी केलाएपछि हाँडीमा राखेर छुट्टाछुट्टै भुट्ने,
– भुटेको गेडागुडी तथा अन्नलाई फेरि राम्रोसँग केलाउने,
– भुटेको गेडागुडीलाई राम्रोसँग पिँध्ने र बोक्रा फाल्ने, पुनः मसिनो बनाएर पिँध्ने,
– भुटेको अन्नलाई छुट्टै मसिनो गरेर पिँध्ने, आवश्यक भए मसिनो जालीमा राखेर छान्ने,
– छुट्टाछुट्टै भुटेर, पिँधेको पिठोलाई दुई भाग अन्नको पिठो र एक भाग गेडागुडीको पिठोलाई तौलेर सफा र सुख्खा भाँडोमा राम्रोसँग मिश्रण गर्ने,
– यसरी मिसाइउको सर्वोत्तम पिठो सफा एवम् सुख्खा बट्ठा, शिशी वा पोलिथिनमा हावा नछिर्ने गरी प्याक गर्ने,
– सर्वोत्तम पिठोलाई सफा उम्लेको तातोपानीमा राखी स्वाद अनुसार चिनी र घिउ राखेर एक छिन चलाएर नरम हुनेगरी फिटेर बाबालिकालाई खुवाउने ।